Wooing More Buyers uye Kuderedza Kutambisa Kupfuura Nehungwaru Zvirimo | Martech Zone
Wooing More Buyers uye Kuderedza Kutambisa Kupfuura Nehungwaru Zvemukati
Chipiri, Gunyana 13, 2016 Chipiri, Gunyana 13, 2016 Jenn Lisak Golding
Kugutsikana kwekushambadzira zvemukati zvakanyorwa zvakaringana, kuburitsa mazana matatu kubva muzana zvinotungamira pamutengo wakaderera nezvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana pakushambadzira kwechinyakare, mishumo KudiwaMetric. Hazvishamise kuti vashambadzi vane hunyanzvi vakachinjisa madhora avo kune zvemukati, nenzira hombe.
Chipingamupinyi, zvisinei, ndechekuti chunk yakanaka yezvinyorwa (65%, muchokwadi) yakaoma kuwana, isina nhumbu kana kusakwezva kune vavanotarisira. Iri idambudziko rakakura.
"Unogona kuve nezvakanakisa zvemukati menyika," akagovana Ann Rockley, muvambi we Akangwara Zvemukati Musangano, "Asi kana iwe usingakwanise kuiendesa kune vatengi vako uye tarisiro panguva yakakodzera, chimiro chakakodzera, uye pachigadzirwa chavanosarudza, hazvina basa."
Uyezve, zvemukati zvekugadzira zvakapetwa kakawanda kune akawanda chiteshi hazvigadzirisike, Rockley anoyambira: "Hatigone kuita iyi yekukanganisa-kuita."
Kune mamwe maonero, iyo Content Marketing Institute inoshuma kuti vatengesi veB2B vakaongororwa kutanga kwegore rino vanoshandisa avhareji ye13 zvemukati maitiro.
93% - zvemagariro midhiya zvemukati
82% - kosi zvidzidzo
81% - mablogiki
81% - mune-zvemukati zviitiko
79% - zvinyorwa pawebhusaiti yekambani
79% - mavhidhiyo
76% - mifananidzo / mapikicha
71% - machena mapepa
66% - webinars / webhusaiti
65% - zviratidziro zvepamhepo
50% kana mashoma - emishumo yekutsvagisa, microsites, ebook, anodhinda magazini, anodhinda mabhuku, nharembozha, nezvimwe.
(Maperesenti anoreva kune vanoongorora vanoongorora vachishandisa nzira iyoyo.)
Uye zvakadaro, inopfuura hafu yezvinyorwa zvekushambadzira zvinonetsa, zvinoenderana ne SiriusDecisions chirevo:
19% haina basa
17% isingazivikanwe nevashandisi
11% yakaoma kuwana
10% hapana bhajeti
8% yakaderera mhando
Kana 65% yezvako zvemukati yakachengetedzwa kana kudzosera vaverengi, iwe unoziva chimwe chinhu chinofanira kuchinja.
Nekudaro, kukwidza uye chivimbiso chezvakangwara zvemukati: zvemukati zvakangwara zvakakwana kuti zvidzore nekuzvigadzirisa pachazvo kumuverengi wega wega uye yake yaanofarira chiteshi. Mhedzisiro yacho: Shape-inoshandura, inogadziriswa yezvinhu inobata moyo yevaverengi, pfungwa uye zvikwama.
Zvemukati zvemukati zvinoratidzwa neinotevera:
Maitiro Akapfuma - Maumbirwo anoita otomatiki kugoneka, uye ese maficha ehungwara zvemukati hinge pairi.
Semantically Akakamurwa - Kushandisa metadata kuona kuti zvinoreva uye mamiriro acho akakodzera kumuverengi.
Inotaridzika Yega - Inowanikwa nyore nyore uye inopedzwa nevose varidzi vezvinhu nevashandisi
Inogona kudzoka - Beyond zvakajairika zvemukati marara, zvimisikidzo zvinogona kuunganidzwa uye kuchinjika munzira dzakawanda.
Inogadziriswazve - Inokwanisa kugadziriswazve alfabheti, nemusoro wenyaya, fomati, pachezvako uye nezvimwe, kune yakasarudzika mushandisi ruzivo.
Zvinogona kuchinjika -Kuchinjira otomatiki muchitarisiko uye nemidziyo kune anogamuchira, chishandiso, chiteshi, nguva yezuva, nzvimbo, maitiro apfuura, uye zvimwe zvinosiyana. Inotevera infographic (pazasi peichi positi) inonyura zvakadzika mune zvine hungwaru zvemukati, uye kuti inogona kugadzirisa sei nyaya yezvakatambiswa zvemukati uye zadzisa chinangwa chayo chekukwezva, kurima uye kushandura vatengi. (Uye zvakare, kudzora kutungamira kwechizvarwa zvinodhura zvakanyanya, kubhutsu.)
Kana iwe usingaite chero chimwe chinhu, iwe unogona kukwidziridza zvemukati uye mashandiro ayo nekukurumidza nekukudziridza anotevera maitiro.
Shandisa zvakadzama tsvagiridzo uye yakakwana mvumo yekuzivisa yako zvemukati, zvakanyanya semutori wenhau aizo
Gadzira zvemukati zvakanangana nemutengi persona.
Shandisa meta tag kubatsira vatengi kuwana zvavanoda.
Dzokororazve, shandisa zvekare uye gadzira zvirimo zvigadzirike.
Hira pro vanyori.
Ongorora zvemukati mashandiro.
Edza, tarisa, dzidza uye gadzirisa.
Zvese zvinhu zvinofungidzirwa, zvirimo zvikuru pasina maturusi akakodzera zvakafanana nekuhaya mujaho wemotokari mutyairi uye nekumupa bhasikoro kuti ahwine mujaho. Pamwe inguva yekutengesa bhasikoro rako kuti uwane zvirinani injini injini.
Tarisa uone izvi zvinotyisa infographic na Wedzera, kubvunza na timu yedu, pamaitiro ekuvandudza yako zvemukati IQ uye nevadzidzi vanobatana nenyika.
Tags: nyayabasab2b vatengesib2b kushambadziravanyoramutengi munhuZvidzidzo zvemhosvaContent MarketingZvemukati Kushambadzira Sisitimu Yekuongororazvirimo kuitavanyoriyemubatanidzwa vieowebhusaiti webhusaititsvakiridzo yakadzamaeBookeenewslettersekisiperimendimifananidzozviitiko-zvemunhuAkangwara ZvemukatiKushambadzira ZvemukatiKushambadzira Infographicsmeta tagsmicrositesMobile AppsAngasweramharidzo dzepamhepomifananidzopurinda mabhukupurinda magazinirepurposetsvakurudzomishumo yekutsvagisashandisazvezvemagariro midhiya zvemukatinjanjiwebcastWebinarsWebsitemapepa machena
3 Zvinhu Zvokufunga NeGoogle Chinyorwa Ad Shanduko